Amabinzana abahlobo bangaphambili Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuzalwa kwentombi yakho kusenokwenzeka ukuba bekuyiminyaka okanye amashumi eminyaka eyadlulayo, kodwa ubukhulu becala kuye kwaba yenye yezona zinto zibalulekileyo ebomini bakho. Ukubhiyozela obu budlelwane bunzulu anabo nentombi yakhe entle, ndiqokelele ingqokelela yeengcaphuno malunga neentombi, imiyalezo ehlekisayo yabahlebi, abakhohlisi, abenzi bobubi, abagxeki, abahlebi, abanyelisi kunye nabo bonke abo bathetha kakubi ngawe, bayakugxeka kwaye bakumonele.
1 Amagama abahlobo bangaphambili
2 Amabinzana abahlobo bangaphambili bobuxoki
3 Amabinzana angabahlobo abangalunganga
4 Amabinzana iividiyo zabahlobo bangaphambili
Ukuba awuhlawuli naliphi na ityala lam, nceda… ungathethi ngobomi bam! Enkosi.
Ndithatha uxanduva lwento endiyithethayo, kungekhona into oyiqondayo. Andivanga.
Iingqondo ezinkulu ziyahlangana ukuxoxa ngezimvo, iingqondo ezihlwempuzekileyo ezifana nezakho, ukuthetha nje ngabanye.
Xa UKUQONDA umona kunye nokugxeka, UKUFUNEKA kwengqondo kuyamamela, kumamele kwaye kuhlekwe.
Ndigwebe ngendlela ofuna ngayo, iyonke, uluvo lolwakho, kodwa inyani yeyam.
Andithethi ngawe, ndithetha ngezinto ezinomdla.
Ndiyile ndlela ndiyiyo, ukuba awundiginyi emva koko yiminxe!
Ngaphambi kokuba uthethe, qhagamshela ulwimi lwakho kwingqondo. Enkosi.
Ukuba awuyithandi le ndlela ndikuyo, tshintsha kuba ndonwabile ngolu hlobo ...
Andizoyiki iinyoka ezinje ngawe, phofu ngamanye amaxesha ndikhe ndikubulise ...
Amabinzana abahlobo bangaphambili bobuxoki
Undijongile, uyandigxeka, uyandimonela kwaye ekugqibeleni… uyandilinganisa!
Ukuthetha ngomlomo opheleleyo kubi kwaye intloko engenanto iyimbi.
Kukho abantu abafana nawe abagxekayo, bagwebe, bathethe kakubi kwaye bahlekise ngabanye kwaye xa befika ekhaya abanakuqonda ukuba kutheni ubomi babo buzele kukukhathazeka, ukukrakra nokudana.
Ndiyakuthanda, nokuba ulutshaba lwam. Nguwe kuphela umpundu ocinga ngam iiyure ezingama-24 ngosuku.
Ndiyazi ukuba uyandijonga, uyandigxeka, uyandihlebela, kwaye kuba awufumani nto ... wenza izinto ngam!
Ndikuphatha ngaphandle kwenzondo ... kodwa ngememori.
Unesifo se "bee": ucinga ukuba uyindlovukazi kwaye uyi bug ...
Wena undigxekayo, awuyazi indlela endibuhlungu ngayo, ukuba awuzange uzuze nto ebomini bakho kwaye ndiyintlekele.
Unamagama amaninzi amnandi, uneswekile emlonyeni wakho, kodwa… ityhefu entliziyweni yakho.
Ngelixa iilwimi ezimbi zithetha ngam, inye kuphela ebalulekileyo kum… uyandanga.
Thetha ngam, ukhwaze, ukhale kwaye ukhabe, ngelixa… ndiyonwaba ngaphandle kwakho.
Amabinzana angabahlobo abangalunganga
Uxolo luyamkelwa, ukuthembana kurhoxisiwe ...
Ngaphambi kokundigxeka, endaweni yeglasi yokukhulisa, sebenzisa isipili.
Abo bangaziyo ngabo bathetha kakhulu, kuba ewe, enye yezinto abangazaziyo kukuthula.
Andimthiyi umntu, okwenzekayo kukuba ubukho babantu abathile kwi el mundo njengawe, iyandikhathaza ...
Bayeke bathethe ngawe kwaye bahlupheke ngento oyithandayo, uphile ubomi bakho kwaye uyonwabele, ngeli xesha unako.
Musa ukuzikhathaza ngeentshaba zakho, kodwa malunga nolwimi lwabamelwane bakho.
Sukuyithemba into oyibonayo… Nokuba ityuwa ibonakala ngathi iswekile.
Uyakumazi ukuba ungumntu onjani ukuba bakuphathe njani xa bengasakudingi.
Abantu abasoloko bekuxelela ukuba bacinga ntoni ngawe, kodwa baya kuhlala bekubonisa. Mamela nje ingqalelo.
Amabinzana iividiyo zabahlobo bangaphambili